RASMI: Goolhaye Jan Oblak oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Atletico Madrid – Gool FM
RASMI: Goolhaye Jan Oblak oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Atletico Madrid
(Madrid) 17 Abriil 2019. Goolhaye Jan Oblak ayaa heshiis cusub oo afar sanadood ah qalinka ugu duugay kooxdiisa Atletico Madrid.
Heshiiskan cusub oo uu Jan Oblak saxiixay waxa uu kooxda Atletico Madrid ee ka dhisan dalka Spain ku sii hayn doonaa illaa sanadka 2023-ka.
26-sano jirkaan xulka qaranka Slovenia ayaa 115 kulan shabaqiisa gool ka ilaashaday 203 kulan oo u saftay kooxda tababare Diego Simeone tan iyo markii uu kaga soo biiray Benfica sanadkii 2014-kii.
Kooxda reer Spain waxa uu kula guuleystay tartanka Europa League sanadkii 2018-kii, waxaana uu ka caawiyey inuu kooxdiisa geeyo final-kii Champions League sanadkii 2016-kii, laakiin waxaa ka qaaday Real Madrid.
Oblak ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxda Atletico Madrid, waxaana uu yiri: “Had iyo jeer waxaan sameyn doonaa waxa ugu wanaagsan si aan u difaaco kooxda, waana sii wadi doonaa shaqada adag”
Atletico ayaa fadhisa haatan kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, waxaana ay sagaal dhibcood ka dambeysaa kooxda hoggaaminaysa ee Barcelona, iyagoo Sabtida la ciyaari doona naadiga Eibar.
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee kooxaha FC Porto Vs Liverpool